Singapore - Berlin amin'ny sidina fiaramanidina tsy miato
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Singapore - Berlin amin'ny sidina fiaramanidina tsy miato
Scoot, zotram-piaramanidina lafo vidy any Azia-Pasifika, ny sandan'ny Singapore Airlines (SIA), izay manana sandany ambany indrindra, dia nandefa ny lalana lavitra hateloana tany Berlin, Alemana. Ny sidina Singapore-Berlin tsy mijanona dia kasaina hanomboka amin'ny 20 Jona 2018.
Berlin no ho laharana fahaefatra an'ny SIA Group any Alemana, aorian'ny Düsseldorf, Frankfurt, ary Munich, izay tantanan'ny SIA. Ny sidina miverina inefatra isan-kerinandro any Singapour - Berlin dia hiara-hiasa amin'ny mpandeha an-dalambe, Boeing 787 Dreamliners, miankina amin'ny fankatoavan'ny lalàna.
Ny tamba-jotra misy an'i Scoot amin'izao fotoana izao dia misy toerana 63 manerana ny firenena 17, miaraka amin'ny sidina mankany Kuantan manomboka ny volana febroary 2018. Scoot dia miasa amina fiaramanidina 16 Boeing 787 Dreamliners sy fiaramanidina fianakaviana 24 Airbus A320, miaraka amin'ny Dreamliners Boeing 4 787 hafa ary fiaramanidina 39 Airbus A320neo milamina.
Ny fandaharam-potoanan'ny sidina ho an'ny serivisy Singapore - Berlin dia toy izao:
Miala an'i Singapore 12:20 maraina
Tonga any Berlin 7:25 maraina
Matetika: Alatsinainy, Alarobia, Zoma, Alahady
Miala Berlin 9:25 maraina
Tonga any Singapour 3:35 maraina (+1)
Amin'ny toerana rehetra